အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ရန်ကုန်-မန္တလေး (၁၃ ရက်ည ၁၄ ရက်မနက် ဇွန် ၂၀၁၀ ခုနှစ်)
ဒါပေမယ့် မန်းက တီ့ အလုပ်လုပ်ဖော်လုပ်ဘက် ကွန်မျူနတီတွေက အစည်းအဝေးတခု လာလုပ်ပေးပါ ဆိုတော့ မရည်ရွယ်ပဲ ရောက်ဖြစ်ပြန်ပါတယ် အရင်ကလဲ ခဏခဏ ရောက်ပါတယ် ပြင်ဦးလွင်လဲဆက်တက်ခဲ့ကြဘူးတာပေါ့ ပျော်ခဲ့ရပါတယ့် အချိန် တွေပါပဲ ပြန်ပြောင်းလွမ်းမိတော့လဲ တမ်းတလာပြန် အောင့်မေ့တော့လဲ နွမ်းလျလာပြန်တာပေါ့လေ....
ကားက လမ်းသစ်ကနေလာတာဆိုတော့ ဖြူးနေတာပါပဲ ခုတော့ ကြွက်တွေ ထနေတယ် ပြောတယ် ညကျတော့ နေပြည်တော် အကျော်လား ပျဉ်းမနား မှာလားမသိ အခု feel တို့ ဘာတို့ ရှိတဲ့နေရာမှာ ခဏ ထမင်းစားနားကြတယ် ဆိုက်ဒစ်ရ်ှက ၅ မျိုးပေးတယ် ကိုယ်က ဆိတ် ကလီစာ မောင်က ငါးဟင်း စားလို့ ကောင်းပါတယ် ခရီးသွားနေတာ ဆိုတော့ သိပ်လဲ ရွေးလို့မဖြစ်ဘူးလေ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်ဆိုတော့ ဒီလိုပါပဲ ပေါ့ အိမ်သာတွေ သန့်လာတာတော့ စိတ်ချမ်းသာရတယ် ခရီးသွားရင် စိတ်ပျက်တာ အဲ့တာတခုပဲ ခုတော့ တော်သေးတာပေါ့ ကိုယ်တွေကတော့ ယောက်ျားလေးတွေဆိုတော့ တော်သေးတယ် (ခုကျတော့လဲ ယောက်ျားဖြစ်သွားပြန်ရောနော်) ကားရပ်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်ညာ တဘက်တချက် ဘယ်လိုပေါက်ပေါက်...ခိစ်
မန်းတလေး မှာစားတာတွေ ထပ်လာမယ်နော် မန်း ၁- ၂ -၃ ဆိုပြီးတော့ ဆက်မျှော်................
naychi July 14, 2010 at 9:48 PM
မျှော်နေမယ် မန်း ၁ ၂ ၃ ကို
အန်တီချမ်း July 14, 2010 at 10:35 PM
ဘုရားအကြောင်း ဘာအကြောင်း ညာအကြောင်းတွေ တော့ သိပ်မမျှော်လင့်နဲ့ ဘာစားသလဲ ဆိုတာတော့ သိရမယ် စိတ်ချ
Crystal July 14, 2010 at 11:13 PM
တီချမ်းရေ ဟိုနေ့က စကားစပြတ်သွားတယ်၊ အီးမေးနဲ့ ဆက်သွယ်ရအောင် အီးမေးလေး ပလိစ့်နော်.....
အန်တီချမ်း July 14, 2010 at 11:44 PM
khin oo may July 15, 2010 at 12:01 AM
x ray ရိုက်ချင်ရအောင် ညည်းရာသီနဲ့ကော လွတ့်ရဲ့လား ပုံမှန်လူငယ်တစ်ယောက်အတွက်တော့ဘာမှ သိတ်တွေ့မယ်မထင်ပါဘူး. အသက်ကြီးရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့။
အန်တီချမ်း July 15, 2010 at 12:17 AM
ဟွန့် သူများက အရိုးတီဘီ ဖြစ်ဘူးတာ သူဖြင့်မသိဘဲနဲ့
ပြီးတော့ အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးက ခရစ်တနင်းတွေ တက်စေတာ
ကျောက်ကပ် ကိုထိစေတာ အဲ့တာတွေ ရှိသေးတယ်
Rita July 15, 2010 at 8:42 AM
ဒီတခါ စားစရာတွေကိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်။
ဗမာစာပဲ စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ တူတယ်။ ဟိုတခါ မက္ကဆီကန်ဖုဒ်တွေမို့ မဝင်စားတာ။
thet July 15, 2010 at 9:53 AM
စားစရာ ပုံ တွေနဲ့သိပ်ပြီးမနှိပ်စက်ပါနဲ့ ။ မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းသွားတယ်
Vista July 15, 2010 at 2:32 PM
sweetpeony July 16, 2010 at 12:54 PM
ဆီများတယ် ၀က်သား အာလူးက..
sirimingala July 20, 2010 at 5:18 PM
စားစရာတွေအများကြီးပါလား။ ဟိ ။
အန်တီချမ်း July 20, 2010 at 5:25 PM
ဘန်ကောက်ရောက်တော့ လာစားပေါ့ မမိုးချို
Shwedragon February 27, 2012 at 7:21 PM
ရေးထားတဲ့ ဟင်းချက်နည်းတွေသိပ်ကောင်းပါတယ် နောက် အေ ဖြစ်နေတာသိလို့လဲ စိတ်မကေင်းပါဘူး
ဒီမှာလည်းကောင်လေးတကောင် အေဖြစ်နေတယ် ၆ နှစ်လောက်ရှိပေမဲ့ ပုံလည်းမပျက် အလုပ်လည်းမပျက်ပါဘူး
A...????? gal lar ?...yon par bu naw...